Home Ulo oru Europe Mason Greenwood Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Mason Greenwood Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu. Ekele diri IG na Wikipedia
LB na-egosi Full Story of a Football Football nke kacha mara amara “Greenwood”. Anyị Mason Greenwood Akụkọ nwata na mgbakwunye Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị. Nchịkọta ahụ metụtara ndụ ya, mmalite ezinụlọ, ndụ onwe ya, eziokwu ezinụlọ, ụdị ndụ ya na obere ihe ndị ọzọ - mara banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ otu n'ime ndị egwuregwu abụọ kachasị mma na football nke oge a. Agbanyeghị naanị ole na ole na-atụle Mason Greenwood's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Mason Greenwood Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Malite na, Mason Ga John Greenwood mụrụ na 1st ụbọchị nke October 2001 na obere obodo Wibsey dị nso na Bradford, England. Amụrụ nne ya, Melanie na nna ya, Andrew.
Mason Greenwood mụrụ nye ndị nne na nna ndị amachaghị banyere ha. Ebe E Si Nweta Foto: TheSun na PXhere.
A zụlitere agbụrụ mba Britain na agbụrụ Africa na ebe amụrụ ya na Wibsey nke dị nso na Bradford ebe o toro n'akụkụ nwanne ya nwanyị nke okenye - Ashton. Na-etolite na Wibsey, Greenwood bụ akụkụ nke ezinụlọ ji akpọrọ ihe egwuregwu na egwuregwu egwu.
Nwata Mason Greenwood toro na Wibsey na Bradford. Ebe E Si Nweta Foto: TheSun na WorldAtlas.
N'ihi nke a, Greenwood toro bọọlụ hụrụ n'anya ma bụrụ nwata na-akwado Manchester United ebe ọ na-efe kpakpando dịka Wayne Rooney. Ka ọ na-erule oge onye na-anụ egwuregwu football dị afọ 5, ọ malitere igwu egwuregwu maka ndị otu mpaghara - Westwood Juniors ma na-atụ anya ọdịnihu dị egwu na egwuregwu ahụ.
Ntorobịa Greenwood na-ejide iko European mgbe United meriri Chelsea na Moscow na 2008. Ebe E Si Nweta Foto: TheSun.
Mason Greenwood Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Mgbe ọ na-egwuri egwu maka Westwood Juniors, Greenwood wepụtara ihe ngosi dị egwu nke dọtara uche nke ndị Scouts si Manchester United bụ onye mere ka ọ banye n'ụlọ akwụkwọ mmepe klọb na Halifax.
Ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ahụ Greenwood bidoro igosipụta agwa na nka gụnyere ịbido n'oge maka omume, iji ụkwụ abụọ wepu nsị dị ike yana mmejuputa ngwa ngwa ọ bụla egosipụtara ya.
Ọganihu Mason Greenwood na agụmakwụkwọ United bụ nke ọma na oke. Ebe E Si Nweta Foto: TheSun.
Mason Greenwood Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography - Ndụ Ndụ Mmalite
Greenwood kwụsịrị site na ọkwa ya na ndị ntorobịa Manchester, na-edekọ ọmarịcha ọnụ ọgụgụ ma na-abanye n'ime mmasị asọmpi dị ka egwuregwu ebe ọ banyere asọmpi Under-13 nke hụrụ ya mebiri ndekọ Britain Great England 100 maka ọgbọ ya.
N'oge elu ọrụ ya, ụzọ dị elu nke Greenwood hụrụ ya nwere nkwalite ntụkwasị obi okpukpu abụọ na ndị otu Manchester United n'okpuru-18 maka oge 2017 – 18. Mgbe ya na ndị ntorobịa nọ, ọ gụchara dị ka onye kachasị asọmpi U18 Premier League North na ebumnuche 17 na egwuregwu 21, a kpọkwara ya Player nke Tournament mgbe akụkụ ya meriri ICGT Trophy na Netherlands.
Greenwood bu ihe ojoo na ndi otu United U18 agbanyeghi na emere ka itinye egwuri egwu maka ndi otu U16. Ebe E Si Nweta Foto: DailyExpress.
Mason Greenwood Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography - Ụzọ E Si Mara Aha
2018 bụ afọ ahụ Greenwood bidoro ọzụzụ ya na ndị otu egwuregwu mbụ nke Manchester ma nyefee ya oche na bench maka United ikpeazụ Champions League otu egwuregwu megide Valencia n'oge ahụ. Jose Mourinho. Nwa agadi nwoke nke 17 gara n'ihu soro ndị otu egwuregwu mbụ na United States na njem njem ha na United States, n'oge na-adịghị anya, ọ mere ka asọmpi ya na-adịghị asọmpi dị ka onye dochie anya Luke Shaw na mmemme 1 – 1 nke United na-emegide Club America.
N'ịbụ onye gosipụtara na ọ bụ otu n'ime atụmanya siri ike na Mahadum United, e nyefere Greenwood nkwekọrịta mbụ ya ọkachamara na 2nd nke October 2018, agbanyeghị, ọ dịghị mgbe a na-eji ya maka nnukwu egwuregwu maka ọnwa ise na-esote.
Mason Greenwood bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na Manchester United na 2nd nke October 2018. Ebe E Si Nweta Foto: Manutd.
Mason Greenwood Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography - Na-ewu Onwe Gị Akụkọ
Greenwood mechara mee asọmpi asọmpi ya na 6th nke March 2019 dị ka onye nnọchi n'oge United's 3 – 1 meriri Paris Saint Germain na UEFA Champions League. Site na mpụta mbụ, Greenwood - nke dị afọ 17 na ụbọchị 156 - ghọrọ onye ọkpụkpọ nke abụọ nke na-anọchi anya Manchester United na asọmpi Europe yana nke ọdụdụ nwa oge agba Champions League.
Ngwa ngwa ngwa taa, Greenwood emeela ka mkpa ọ dị na ndị otu mbụ nke United dị ka onye tụkwasịrị obi na-atụ anya ya na ọtụtụ ndị jiri ya tụnyere ndị agha dịka Robin Van Persie Wayne Rooney na Ryan Giggs. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Greenwood ewepụtala onwe ya nke ukwuu na otu egwuregwu mbụ nke United na ọ na-ejikarị ya na akụkọ egwuregwu klọb. Ebe E Si Nweta Foto: DailyMail.
Mason Greenwood Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography - Ezigbo Ndụ Mmekọrịta
Mason Greenwood alughi di na nwunye n’oge edere. Anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara akụkọ gbasara nwoke na nwanyị na ọnọdụ mmekọrịta ọhụụ. Na-ekwu banyere akụkọ mkpakọrịta nwoke na nwanyị Greenwood, amabeghị ihe banyere ndụ ihunanya nwoke na nwanyị ahụ tupu ọ malite na ama ama.
Ọ bụ tupu 8 nke June 2019 ka Greenwood biputere foto nke obere enyi nwanyị ya mara amara na Instagram. N'agbanyeghị amatabeghị njirimara nwanyị ahụ n'oge edere akwụkwọ, ekwenyere na Greenwood chọrọ ime ka mmekọrịta ya na ọkwa dị ala ka ọ dị ugbu a. Ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị otu n'ime ụmụ abụọ ahụ nwere nwa nwoke (nwa) ma ọ bụ nwa nwanyị na-alụghị n'oge edere.
Mason Greenwood ya na enyi nwanyị ya amaghi ama. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram
Mason Greenwood Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography - Ezi Ezinụlọ
Mason Greenwood sitere na nzụlite ezinụlọ nke etiti. Anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara ndụ ezinụlọ ya.
Banyere nna Mason Greenwood: Andrew bụ nna Greenwood. Ọ bụ injinia nke na-arụ ọrụ na mpaghara Yorkshire ebe ezinụlọ ya bi na Manchester n'oge edere. Andrew enweela ezigbo mmetụta na ndụ onye na-aga n'ihu ma na-akwado ya na ọnọdụ nna.
Banyere nne Mason Greenwood: Melanie bụ nne Greenwood. O nyere aka nyere aka n'ịzụlite ndị a zụlitere n'ụzọ dị mma n'ịkụzi ya ka ọ dị obi umeala ma na-echekwa ya dịka o siri dị ya mkpa taa. Melanie bi na Greenwood na Manchester dịka akụkụ nke mbọ a na-agba iji nye ndị na-aga n'ihu ọnọdụ dị mma ga-eme ka ọ nọrọ n'ọrụ ya.
A zụlitere Mason Greenwood site na nne na nna na-akwado nkwado nke ọ bụ ihe a na-amaghị banyere ya. Ebe E Si Nweta Foto: ClipArtStation na Manutd.
Banyere Mason Greenwood nwanne: Greenwood nwere nwanne nwanyị okenye nke akpọrọ Ashton. Ọ bụ sprinter nke na-agba ọsọ na Trafford ma gaa mahadum Manchester Metropolitan na agụmakwụkwọ egwuregwu n'oge ederede. Obi abụọ adịghị ya nso na Greenwood bụ onye nwekwara mmasị na mkpesa.
Banyere ndị ikwu Mason Greenwood: Apụghị site na ezinụlọ nke Greenwood nso nso, amachaghị banyere nne na nna ya ochie yana nna ochie na nne nne. N'otu aka ahụ, enweghị ndekọ banyere nwanne nne nwanne nna Greenwood, nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya amabeghị ihe ndị ama ama nke ndụ ya rue taa.
Mason Greenwood Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography - Ezigbo Ndụ Onye
Kedu ihe na-eme Mason Greenwood akara? Nọdụ ala ka anyị na-ewetara ụnụ ụdị omume ya iji nyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Iji bido, Greenwood's persona bụ ngwakọta nke àgwà Libra zodiac.
Ọ nọ n'ụwa, ọ ga-agbaghara mmehie, ọ nwere ọrụ dịịrị ya, na-egosikwa nkọwa banyere ndụ ya na nke onwe ya. Banyere ọdịmma na ntụrụndụ Greenwood, ọ hụrụ ige egwu, ịkọwa ya, na-ese foto, na-ekiri fim ma soro ndị enyi ya na ndị ezinụlọ ya nọrịa.
Greenwood na - ewere foto dika ya dika ihe omimi. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram
Mason Greenwood Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography - Eziokwu Nzuzo
Mason Greenwoods ụgbụ bara uru ka na-enyocha n'oge edere. Agbanyeghị, o nwere uru ahịa nke € 7,00 Nde. Isi mmalite nke obere ihe ọmụma ya ama ama nwere ụgwọ ọrụ ọ na-enweta site na mbọ ịgba bọl ebe nyocha nke ndụ ya na-egosi na ọ na-ebi ndụ nchekwa.
Ọ dị mma ịmara na Greenwood abụghị nnukwu onye na-akpata ego n'oge edere, yabụ a na-etinye elekwasị anya na arụmọrụ ndị a na-aga n'ihu n'ọhịa egwuregwu kama ịnwe ike ịnweta akụ dịka ụlọ na ụgbọala.
Ọ bụ ọtụtụ ihe amachaghị banyere ndụ Greenwood na-abụghị na bọọlụ n'oge edere. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram
Mason Greenwood Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography - Eziokwu efu
Iji kpoo akụkọ banyere nwata Mason Greenwood na akụkọ ndụ anyị anyị na-ewetara akụkọ ndị a na-akọwaghị ma ọ bụ ndị amachaghị bụ ndị na-agbasaghị na akụkọ ndụ ya.
Mason Greenwood amuru ma zulite dika onye Kristian. Nke ka nke bụ na o nwere aha ndị Kristian, ma ọ pụtabeghị ịkọ ihe n'okwu okpukpe.
Ọ bụ onye mba ofesi England ma nọchitela anya ndị otu egwuregwu England n'okpuru-17 gụnyere gụnyere isonye n'òtù egwuregwu bọọlụ na asọmpi Algarve na Portugal.
Mason Greenwood na ọrụ mba ụwa maka England U17. Ebe E Si Nweta Foto: HITC.
Onye nwe gaban ahụ enweghị egbugbu na ahụghị ya ọ drinkingụ drinkingụ n'oge edere. A naghị enye ya sịga.
Isi njirimara nke Greenwoods gbara okpukpu abụọ bụ ikike ya iji ụkwụ ya na-ezighi ezi were otu akụkụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Mason Greenwood Akụkọ nwata na mgbakwunye Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.